လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး(လျှပ်စစ်) ဦးခင်မောင်ဝင်းသည် China Gezhouba Group Co.,Ltd. မှ Assistant President ဖြစ်သူ Mr. Wong Zhifai နှင့် IGE Power Co., Ltd. ၏ Chief Operating Officer ဖြစ်သူ ဦးဇေလတ်ဝင်း ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့၊ ၁၅:၀၀ နာရီအချိန်တွင် လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂၇)၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် China Gezhouba Group Co.,Ltd. မှ လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်မှစ၍ မြန်မာ နိုင်ငံ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများ၊ လက်ရှိ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည့် စီမံကိန်းများအား အရှိန်အဟုန်မြှင့်၍ အမြန်ဆုံး ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အတွက် ဝန်ကြီးဌာနမှ ပံ့ပိုးပေးနိုင်မှုများ၊ အနာဂတ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေး စီမံကိန်း များတွင် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင် Solar Power Project များအတွက် မူဝါဒရေးရာနှင့် စီးပွားရေးရာအရ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်မှ စီမံဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေ၊ Human Resources Development ကဏ္ဍအတွက် ပူးပေါင်းပံ့ပိုးဆောင်ရွက်နိုင်မည့် Training and on job training ဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များ၊ အနာဂတ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တိုးမြှင့် ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးနှင့် ဖြန့်ဖြူးနိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်မှ ချမှတ်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည့် အစီအမံ များနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါ တွေ့ဆုံပွဲသို့ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးတင်မောင်ဦး၊ ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများ၊ China Gezhouba Group Co.,Ltd. မှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။